Ngithola kanjani ama-backlink aphezulu e-PR GOV?
Ukuthola i-Pagerank ephakeme i-GOV backlinks ingakwazi ukuphakamisa izinga eliphezulu lewebsite yakho. Kodwa-ke, phawula ukuthi ukuwathola kuwumsebenzi onzima nesikhathi esiningi. Futhi-ke, abanye abantu basaphikisana ngokuthi i-Google ayinakekeli ngempela leyo dot dot EDU noma ichaza i-GOV backlink noma yikuphi okuhlukile. Noma kunjalo, isabelo sezingonyama noma izinzuzo zangempela ku-SEO zicabanga ngenye indlela. Kungani? Kulungile, ake sithi i-Google ayiboni ukuthi ingcono kunezinye izizinda eziyaziwayo (e. g. , i-dot COM, i-dot NET, noma i-ORG dot). Noma kunjalo, isici esiphakeme se-GOV backlinks kufanele sinikeze isisindo namandla engeziwe, ngokuyinhloko kusukela kumbono we-Search Engine Optimization.
Ngakho, ukunganaki ukuthi akukho ncazelo esemthethweni enikezwe i-Google okwamanje, ukubaluleka okuphezulu kwe-dot backlink ye-dot akufanele neze kunganakwa. Eqinisweni, ayaziwa yizinhlelo eziningi ze-SEO njenge-grail engcwele yesakhiwo esinamandla sokuhlanganisa, ngoba zivame ukuvela kumawebhusayithi athenjwa kakhulu futhi athembekile kuphela.
I-SEO yangempela Inani
Ngakho-ke, kuthiwani nge-SEO value ye-dot GO backlinks? Awukho ama-superpowers anawo. Kodwa lokhu kusikisela okungavamile kusekhona ngokwezinga elithile. Futhi-ke, noma yiliphi iwebhusayithi noma ibhulogi engathola ngaphandle kokufaka lezo zinkinga zangaphambili kuphrofayli yabo, futhi zisalokhu zihle kakhulu ku-Google. Ngisho ukuthi uma unenhlanhla ngokwanele ukuthola ama-backlinks engeziwe e-GOV backlinks, iwebhusayithi yakho noma ibhulogi kuzothola inzuzo efanelekile yokuphuma emncintiswaneni, ngenxa yesigunya sakho esinamandla. Ngakho-ke, ukubheka ukubaluleka kwabo kwe-SEO kuletha inselela - kunzima kakhulu ukuthola uxhumano lwezandiso zesizinda nemithombo e-intanethi ephethwe ohulumeni ngokwawo noma iziphi izisekelo ezisemthethweni ezihlobene. Into yukuthi ngeke neze ixhumane nanoma ubani ngaphandle kwesizathu, noma ngaphandle kwesizathu esizwakalayo.
Njengoba sengishilo kakade, ukuthola ama-backlink kahulumeni kuwumsebenzi obanzi nokusebenza isikhathi. Kodwa kusengumsebenzi ofanelekile, ngoba njalo ukhokha kahle kakhulu - ngokuqinisekile kuncono kunanoma yimaphi amanye ama-backlink, ngisho nakwebhusayithi engcono kakhulu ye-Pagerank noma izizinda eziphezulu zegunya. Ngakho, ngaphambi kokuba uqale, qiniseka ukuthi uthola konke okukhona. Ngisho ukuthi okuqukethwe kwakho kwekhasi lewebhu noma ibhulogi elikhona kufanele libe yinto efundisayo kuphela, ehambisana nesihloko esiyinhloko futhi ihambise inani elikhulu kubantu bangempela. Ngaphezu kwalokho, amakhasi akho wewebhu kufanele ayenze kahle ngokuphathelene nesayithi ye-SEO ukuba ihambele ngokuphelele lezo zisekelo zezombusazwe nezindawo zabo ezisemthethweni.
Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, qinisekisa ukuthi iphrofayili yamanje ye-backlink yewebhusayithi yakho isivele ithwale ezinye izixhumanisi eziphezulu ze-PR, i-PA, ne-DA. Ngaleyo ndlela, uyoba nomusa kakhulu ukuthola lezo zinto eziyigugu kakhulu. Ukwenza kanjalo, ungakhohlwa ukuthi ukuba umgqugquzeli wemboni kuhlale kukuhle kuwe-ngisho nangaphandle komsebenzi wethu - ukusebenzisa igunya lakho eliqinile nekhono lobuchwepheshe elidingekayo lokuheha ama-backlink amachashazi we-GOV, mhlawumbe kusuka emithonjeni enamandla kakhulu futhi ethembekile kuWebhu.
Ukufuna amasayithi afanele
Uma uqinisekise ukuthi konke okukhona newebhusayithi yakho noma ibhulogi kusendaweni, sekuyisikhathi sokuthola amawebhusayithi asemthethweni okuxhumanisa nge. Into yukuthi kunezandiso eziningi zezizinda ezinjalo, kunokuba kubalwa inani langempela lezisekelo ezihambisanayo nezinhlangano ezisemthethweni. Kusho ukuthi akuyona yonke imithombo e-intanethi enezindawo ze-dot GO dot ezahlangana nohulumeni wangempela. Ngakho-ke, ukucinga amasayithi afanele, kuzodingeka ube nokuhlola okubili okusemthethweni. Singathola kanjani ama-ejenti wangempela nayo yonke imithombo ephezulu ephezulu? Ngincoma ukusesha nge "isayithi:. I-gov "i-modifiers ethuthukile ukuze ukwazi ukubeka ukugxila okuqondile.
Ukubeka amazwana kwi-Top Related Blogs / Amawebhusayithi
Yebo, ukushiya amazwana kubhulogi kahulumeni kanye namawebhusayithi kungenye yezindlela ezingcono zokuthola lezo zindatshana eziyigugu ze-GOV backlinks. Yiqiniso, ngokungafani nokuphawula kwamanye amazwe ukuze uthole ama-backlink ngokubuyisela, lokho kungaba umsebenzi onzima nakakhulu. Kodwa isisetshenziswa kakhulu-indlela eqinisekisiwe yokuqedela umsebenzi, ngakho-ke ngincoma ukuyilinga ngaphambi kwanoma yini enye.
Ngakho, into yukuthi isabelo sezingonyama kumawebhusayithi kahulumeni noma amabhulogi akanayo indawo yokubeka amazwana ngqo. Uma kufanele babe nalolu khetho noma kunjalo, izinketho zabo zokubeka amazwana zingase zifike ngeNoFollow. Kusho ukuthi kuzodingeka ukhokhe isikhathi esithile nemizamo yokuthola ikhasi elifanele lesayithi noma ibhulogi engekhoAyikho. Naphezu kokuthi amathuba akho okuthola ama-backlink aphezulu we-PR amaphahla we-GOV angase abe slim, ukushiya amazwana kuwufanele ukudubula. Vele uqiniseke ukuthi ukuphawula kwakho kusemqoka futhi kuyigugu ngokwanele futhi kuza ngaphandle kokugaxekile.
Ukuze uthole amathuba angcono ukuthola izindawo ezivumela amazwana we-DoF ukulandela, ngincoma ukusebenzisa "isayithi:. gov inurl: ibhulogi. "Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokuzama ukuthola amaphuzu e-dot GO backlink kusuka kumazwana, ungasebenzisa nezinye izici. Kodwa-ke, akunjalo ukuthi uzodinga okuqukethwe okukhulu kakhulu nokucindezelayo. Ngakho-ke, ake sibe nombukiso omfushane ngezansi.
Zama ukubhala ngalokhu okulandelayo:
Isikhungo sikaHulumeni - bhala isihloko sekhwalithi,. Ukufanekisa lokho, ake sithi uqhuba inkampani ephethe amandla avuselelekayo, noma isibonelo, uyinkontileka yasekhaya esebenza kahle. Ngaleyo ndlela, konke okudingayo lapha ukudala ingxoxo yokuthunyelwe kwebhulogi ehambisanayo noma isihloko esiphelele esinikezwe eHhovisi leNamandla avuselelekayo kanye nokusebenza kahle kwamandla. Ip tip: ukuqondisa izilaleli zomhlaba wonke kuyindlela enhle yokuxhumana no-ejensi kahulumeni wangaphandle.
Wezombusazwe - njengendlela eyedlule yokubhala i-athikili mayelana ne-ejensi kahulumeni, ukhululekile ukwenza umqondo ovelele noma ubhale ngombusazwe owaziwayo noma umuntu obhekana nanoma yiziphi izindaba zomthetho ezihlobene nezithinta ibhizinisi lakho. Ungabeki isikhathi sakho nemizamo yakho ngokubhala mayelana namathemba eminye imithetho ephakanyisiwe yakamuva, isibonelo, okuhambisana nesifundo sakho sebhizinisi esisemqoka noma amazinga aphezulu ahlobene nokuhweba. Vele udale i-athikili enamandla kakhulu futhi uyixhumanise nalokho okuphakamisa isombusazwe noma umuntu ophethe lokho. Bese, wazise iziphathimandla ezithakazelisayo mayelana nencwadi yakho entsha.
I-Agent Interview - khetha isihloko esifanele futhi uxoxe nelungu elimisiwe lensiza yendawo. Ngokuvamile, uzovunyelwana ukuba ube nengxoxo, ngokuqinisekile unikezwe ukuthi unesihloko esifanele sokuxoxa. Ngaleyo ndlela, uzokwazi ukwenza incwadi kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi ngesixhumanisi, esho kuleyo nhlangano kahulumeni. Qaphela, ukuthi kwezinye izimo noma umuntu oxoxwa naye noma u-ejensi kahulumeni angase ahlanganyele le ngxoxo ngokwabo. Uma kufanele kwenzeke kanjalo, cishe uzojabulela amanye amachashaza engeziwe e-GOV backlinks, ngaphandle kokuqala kwakho.
Yakha Ukuxhumana Okusha - ukuzama ukuxhumana othintana naye noma ukusetha ubambiswano obusha kahulumeni kungabuye ibe indlela enhle yokuthola ama-backlink amaningi we-GOV ne-Pagerank ephakeme kakhulu. Yiqiniso, akulondolozeki ngaso sonke isikhathi - ngoba yonke into lapha izoxhomeka kakhulu kwi-niche yakho ye-website noma ibhulogi yakho enkulu. Noma kunjalo, ngezinye izikhathi kuyoba ithuba elihle kakhulu lokufika othintana nohulumeni abengeziwe. Ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, ukukhululwa kwe-press ne-backlink kuya ejensi kuyadingeka ukudubula. Ngaleyo ndlela, khumbula ukuthi ukudala ubudlelwano ne-ejensi kahulumeni nakho kuyinto ezuzisa kakhulu. Okungcono, lokhu kungaholela emakhasini abo asemthethweni ngokuvamise ukuxhumanisa kuwebhusayithi yakho yebhizinisi eliyinhloko noma ibhulogi esekelayo.
Bamba iqhaza ku-Outreach - ungase usebenze ekudaleni ikhasi lemithombo ngamathuba amaningi, noma uzama ukuthola uhlu kwamanye amakhasi wezinsiza zebhizinisi lendawo. Ungazibeka ngokwakho, isibonelo ukwenza iminikelo yosizo ukuthi ibhalwe ohlwini kumthombo ozinikezele nge-link ewusizo ekhomba kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi.
Isitoreji - ukukhohlisa i-website kahulumeni cishe njalo kuthola lezo backlink eziyigugu. Vele ufunde kabanzi mayelana nezinkinga ezibuhlungu kunazo zonke ze-ejensi kahulumeni futhi nje wenze okuthunyelwe ukutshela kahle ukuthi bangathanda ukuzwa. Yiqiniso, ngeke kube yindlela eqinisekisiwe yokuthola amanye ama-backlinks we-dot GO, kodwa uma uzizwa ngendlela efanele - lolu hlelo lusebenza kahle kakhulu.
Ngemuva kwakho konke, kuzodingeka uqinisekise ukuthi ama-backlink akho amasha we-dot. Ngisho ukuthi kuzosolisa ku-Google uma iphrofayli yakho yokuxhumanisa yewebhu noma ibhulogi ishesha ngokuthuthukiswa ngezixhumanisi eziningi zikahulumeni. Ngakho-ke, ngincoma ukuba uhlolwe kabili kuzo zonke izinkampani zangasese ezitholakala emuva ngemuva kokuthola i-backlink esanda kutholakele usebenzisa noma yimaphi amathuluzi e-inthanethi mahhala wokwakha nesixhumanisi. Phakathi kwabanye, ngithole i-Open Site Explorer, i-Semalt Analyzer, ne-Screaming Frog njengento ewusizo kakhulu yokusebenzisa ukuhlaziywa okuphelele kwephrofayela yami ye-backlink ye-blog Source . Qhubeka usebenza ngokuqhubekayo, nenhlanhla!